White Discharge during Pregnancy – My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
ကိုယျဝနျဆောငျနစေဉျ အဖွူဆငျးတယျဆိုတာ ?
မမဗိုကျတို့အတှကျ မိမိမှာ ရငျသှေးရှိပွီဆိုတာ သိလိုကျရတဲ့ခြိနျကစ…ကိုယျ့ရဲ့ ကနျြးမာရေးကို သာမနျထကျပို ဂရုစိုကျကွရမှာပါ… ဒီလိုအခြိနျမှာ ကိုယျဝနျဆောငျတို့ ဖွဈလဖွေဈထရှိတဲ့ ကနျြးမာရေးပွသနာမြားထဲမှ ” မိနျးမကိုယျတှငျးမှ အဖွူဆငျးခွငျး ” အကွောငျး ပွောပွခငျြပါတယျ…
အမြိုးသမီးတဈယောကျ ကိုယျဝနျဆောငျစဉျမှာ… ခန်ဓာကိုယျရဲ့ အတှငျးရော အပွငျမှာပါ ပွောငျးလဲမှု ဖွဈစဉျတှေ အမြားကွီး ဖွဈတတျပါတယျ…ပွောရမယျဆိုရငျ ဗိုကျလေး ပိုပိုပူလာတာနဲ့ အမြှ ပွောငျးလဲမှုတှေ ပိုပိုလာတယျပေါ့…
သားအိမျခေါငျးမှ ထှကျသော အဖွူရောငျအကြိအခှဲမြား
– ကိုယျဝနျဆောငျစဉျကာလမှာ … သားအိမျနဲ့.. သားအိမျခေါငျးဆီကို သှေးစီးဆငျးမှုပိုမြားပါတယျ… ဒီလိုအခါမှာ သားအိမျခေါငျးဆီကနေ leukorrhea လို့ချေါတဲ့ အရညျအကြိအခြှဲတှေ ပိုထုတျတတျပါတယျ.. မြားသောမြားဖွငျ့ ကိုယျဝနျစဆောငျကာစ သုံးလနဲ့.. မှေးဖှားကာနီး သုံးလမှာ ပိုအဖွဈမြားပါတယျ… ဒါဟာ ဖွဈလဖွေ့ဈထရှိပါတယျ… နာကငျြမှု မရှိတတျပါဘူး… သို့ပမေယျ့ တခါတရံ ယားယံခွငျးတှေ ဖွဈနိုငျပွီး.. နထေိုငျရခကျစနေိုငျပါတယျ…အနံ့အသကျနညျးနညျးရှိပါမယျ… အတှငျးခံကို ပုံမှနျ လဲပေးပါ… အနံ့အသကျပြောကျစသေော ဆပျပွာနှငျ့ စငျကွယျစှာ ဆေးကွောပါ…
– သို့သျော… ဒီလို အဖွူအရောငျမြား အကြိအခှဲမြဟုတျပဲ… အဝါရောငျ အစိမျးရောငျရှိခွငျး၊ အနံ့အသကျ အလှနျဆိုးခွငျး၊ မိနျးမကိုယျတဝိုကျ ယားယံခွငျး၊ နီမွနျးခွငျးရောငျခွငျး .. အစရှိတာတှေ ဖွဈလြှုငျ မိနျးမကိုယျတှငျး ပိုးဝငျတာဖွဈနတေတျပါတယျ… ဒီလို လက်ခဏာမြားတှရေ့ပါက သကျဆိုငျရာ သားဖှားမီးယပျ (သို့) ဆရာဝနျဆီ သှားပွသငျ့ပါတယျ…
ဒါပွငျ ကိုယျဝနျဆောငျနစေဉျမှာ တကိုယျရေး ကနျြးမာရေးကို ဂရုစိုကျသငျ့ပါတယျ..
– tampons မသုံးသငျ့ပါ.. မိနျးမကိုယျထဲကို ပိုးမှားမြား ပိုဝငျနိုငျပါတယျ..
– သနျ့စငျဆေးရညျ မသုံးသငျ့ပါ… မိနျးမကိုယျထဲက အန်တရာယျ မဖွဈစတေဲ့ ပိုးမှာမြားပါ သစေနေိုငျပွီး မီးယပျရောဂါ ပိုဖွဈစနေိုငျပါတယျ…
– အကယျ၍ မိနျးမကိုယျတှငျ ပိုးဝငျနသေော လက်ခဏာ တှရေ့သညျဖွဈစေ .. စိတျထဲ ထငျနရေသညျဖွဈစေ.. မိမိဘာသာ ကုသခွငျး မလုပျပါနှငျ့…
– အမြိုးသမီးသုံးပစ်စညျး(ဂှမျးထုပျ) ချေါ panty liner သာ အသုံးပွုပါ..
– မိမိမှာ ကနျြးမာရေးနှငျ့ ပတျသတျ၍ တဈခုခု ခြို့ယှငျးလာခွငျး(သို့) စိတျထဲ မရှငျးလငျးပါက ဆရာဝနျနှငျ့ ဆှေးနှေးတိုငျပငျပါ
– ကိုယျဝနျပုံမှနျပွပါ.. ကနျြးမာရေးစဈဆေးမှု ပုံမှနျလုပျပါ…
ကနျြးမာပြျောရှငျသော ကိုယျဝနျဆောငျမိခငျမြား ဖွဈကွပါစလေို့ တောငျးဆုမတ်ေတာပွုလကျြ….
​​ကိုယ်​ဝန်​​ဆောင်​​နေစဉ်​ အဖြူဆင်းတယ်​ဆိုတာ ?
မမဗိုက်​တို့အတွက်​ မိမိမှာ ရင်​​သွေးရှိပြီဆိုတာ သိလိုက်​ရတဲ့ချိန်​ကစ…ကိုယ့်​ရဲ့ ကျန်းမာ​ရေးကို သာမန်​ထက်​ပို ဂရုစိုက်​ကြရမှာပါ… ဒီိလိုအချိန်​မှာ ကိုယ်​ဝန်​​ဆောင်​တို့ ဖြစ်​​လေဖြစ်​ထရှိတဲ့ ကျန်းမာ​ရေးပြသနာ​များထဲမှ ” မိန်းမကိုယ်​တွင်းမှ အဖြူဆင်းခြင်း ” အ​ကြောင်း ​ပြောပြချင်​ပါတယ်​…
အမျိုးသမီးတစ်​​ယောက်​ ကိုယ်​ဝန်​​ဆောင်​စဉ်​မှာ… ခန္ဓာကိုယ်​ရဲ့ အတွင်း​ရော အပြင်​မှာပါ ​ပြောင်းလဲမှု ဖြစ်​စဉ်​​တွေ အများကြီး ဖြစ်​တတ်​ပါတယ်​…​ပြောရမယ်​ဆိုရင်​ ဗိုက်​​လေး ပိုပိုပူလာတာနဲ့ အမျှ ​ပြောင်းလဲမှု​တွေ ပိုပိုလာတယ်​​ပေါ့…
သားအိမ်​ခေါင်းမှ ထွက်​​သော အဖြူ​ရောင်​အကျိအချွဲများ
– ကိုယ်​ဝန်​​ဆောင်​စဉ်​ကာလမှာ … သားအိမ်​နဲ့.. သားအိမ်​​ခေါင်းဆီကို ​သွေးစီးဆင်းမှုပိုများပါတယ်​… ဒီလိုအခါမှာ သားအိမ်​​ခေါင်းဆီက​နေ leukorrhea လို့​ခေါ်တဲ့ အရည်​အကျိအချွဲ​တွေ ပိုထုတ်​တတ်​ပါတယ်​.. များ​သောများဖြင့်​ ကိုယ်​ဝန်​စ​ဆောင်​ကာစ သုံးလနဲ့.. ​မွေးဖွားကာနီး သုံးလမှာ ပိုအဖြစ်​များပါတယ်​… ဒါဟာ ဖြစ်​​လေ့ဖြစ်​ထရှိပါတယ်​… နာကျင်​မှု မရှိတတ်​ပါဘူး… သို့ပေမယ့် တခါတရံ ယားယံခြင်း​တွေ ဖြစ်​နိုင်​ပြီး.. ​နေထိုင်​ရခက်​​စေနိုင်​ပါတယ်​…အနံ့အသက်​နည်းနည်းရှိပါမယ်​… အတွင်းခံကို ပုံမှန်​ လဲ​ပေးပါ… အနံ့အသက်​​ပျောက်​​စေ​သော ​ဆပ်​ပြာနှင့်​ စင်​ကြယ်​စွာ ​ဆေး​ကြောပါ…
– သို့​သော်​… ဒီလို အဖြူအ​ရောင်​များ အကျိအချွဲမဟုတ်​ပဲ… အဝါ​ရောင်​ အစိမ်း​ရောင်​ရှိခြင်း၊ အနံ့အသက်​ အလွန်​ဆိုးခြင်း၊ မိန်းမကိုယ်​တဝိုက်​ ယားယံခြင်း၊ ​နီမြန်းခြင်း​ရောင်​ခြင်း .. အစရှိတာ​တွေ ဖြစ်​လျှုင်​ မိန်းမကိုယ်​တွင်း ပိုးဝင်​တာဖြစ်​​နေတတ်​ပါတယ်​… ဒီလို လက္ခဏာများ​တွေ့ရပါက သက်​ဆိုင်​ရာ သားဖွားမီးယပ်​ (သို့) ဆရာဝန်​ဆီ သွားပြသင့်​ပါတယ်​…
ဒါပြင်​ ကိုယ်​ဝန်​​ဆောင်​​နေစဉ်​မှာ တကိုယ်​​ရေး ကျန်းမာ​ရေးကို ဂရုစိုက်​သင့်​ပါတယ်​..
– tampons မသုံးသင့်​ပါ.. မိန်းမကိုယ်​ထဲကို ပိုးမွှားများ ပိုဝင်​နိုင်​ပါတယ်​..
– သန့်​စင်​​ဆေးရည်​ မသုံးသင့်​ပါ… မိန်းမကိုယ်​ထဲက အန္တရာယ်​ မဖြစ်​​စေတဲ့ ပိုးမွှာများပါ ​သေ​စေနိုင်​ပြီး မီးယပ်​​ရောဂါ ပိုဖြစ်​​စေနိုင်​ပါတယ်​…
– အကယ်​၍ မိန်းမကိုယ်​တွင်​ ပိုးဝင်​​နေ​သော လက္ခဏာ ​တွေ့ရသည်​ဖြစ်​​စေ .. စိတ်​ထဲ ထင်​​နေရသည်​ဖြစ်​​စေ.. မိမိဘာသာ ကုသခြင်း မလုပ်​ပါနှင့်​…
– အမျိုးသမီးသုံးပစ္စည်း(ဂွမ်းထုပ်​)​ ​ခေါ် panty liner သာ အသုံးပြုပါ..
– မိမိမှာ ကျန်းမာ​ရေးနှင့်​ ပတ်​သတ်​၍ တစ်​ခုခု ချို့ယွင်းလာခြင်း(သို့) စိတ်​ထဲ မရှင်းလင်းပါက ဆရာဝန်​နှင့်​ ​ဆွေး​နွေးတိုင်​ပင်​ပါ
– ကိုယ်​ဝန်​ပုံမှန်​ပြပါ.. ကျန်းမာ​ရေးစစ်​​ဆေးမှု ပုံမှန်​လုပ်​ပါ…
ကျန်းမာ​ပျော်​ရွှင်​​သော ကိုယ်​ဝန်​​ဆောင်​မိခင်​များ ဖြစ်​ကြပါ​စေလို့ ​တောင်းဆု​မေတ္တာပြုလျက်​….